Qaboojiyaha Mini iyo Midi City Bus ama warshada baska dalxiiska iyo soo saarayaasha | SONGZ
Taxanaha SZG waa nooc ka mid ah saqafka hawo qaboojiye leh. Waxay khuseysaa baska magaalada 6-8.4m iyo bas bas dalxiis 5-8.9m. Si loo helo noocyada ugu ballaaran ee codsiyada moodooyinka basaska, waxaa jira laba nooc oo ballac ah oo taxanaha SZG ah, 1826mm iyo 1640 siday u kala horreeyaan.
SZG Series, oo ah basaska magaalada 6-8.4m iyo baska dalxiiska ee 5-8.9m, AC baska yar iyo midi baska
SZGK-ID (Width in 1826mm)
SZGZ-ID (Width in 1640mm)
SZGK-IF-D / SZGK-II-D / SZGK-II / FD / SZGK-III-D (Ballaaran 1826mm)
SZGZ-IF-D / SZGZ-II-D / SZGZ-II / FD (Ballaaran 1640mm)
Taxanaha SZG waa nooc ka mid ah saqafka hawo qaboojiye leh. Waxay khuseysaa baska magaalada 6-8.4m iyo bas bas dalxiis 5-8.9m. Si loo helo noocyada ugu ballaaran ee codsiyada moodooyinka basaska, waxaa jira laba nooc oo ballac ah oo taxanaha SZG ah, 1826mm iyo 1640 siday u kala horreeyaan. Faahfaahin dheeraad ah fadlan hoos ka eeg ama waad nala soo xiriiri kartaa sales@shsongz.cn wixii faahfaahin dheeraad ah.
Faahfaahinta Farsamada ee Basaska A / C SZG:
Model (Nooc ciriiri ah):
8 kW ama 27296 Btu / h
12 kW ama 40944 Btu / h
16 kW ama 54592 Btu / h
20 kW ama 68240 Btu / h
(Qolka Evaporator 40 ° C / 45% RH / Qolka Kondenser 30 ° C)
10 kW ama 34120 Btu / h
14 kW ama 47768 Btu / h
18 kW ama 61416 Btu / h
22 kW ama 75064 Btu / h
Lugta Lagu Taliyay ee Lagu Tilmaamayo Cimilada Shiinaha）
AK33 (TM31 waa ikhtiyaari)
Miisaanka (oo leh Lidka)
Qiyaasta Hawada Hawada (Cadaadiska Zero)
Condenser (Tirada Fan)
4400 m3 / saac (2)
6000 m3 / saac (3)
Uumi-bixiye (Tira badan)
1800 m3 / saac (2)
3600 m3 / saac (4)
Model (Nooc Wide)
24 kW ama 81888 Btu / h
26 kW ama 88712 Btu / h
SZG-IX-D Macluumaadka Farsamada Macluumaadka Farsamada SZGK-ID SZGK-IF-D Macluumaadka Farsamada
SZGK-II-D Macluumaadka Farsamada SZGK-IIF-D Macluumaadka Farsamada SZGK-III-D Macluumaadka Farsamada
SZG-XD Macluumaadka Farsamada Macluumaadka Farsamada SZGZ-ID SZGZ-IF-D Macluumaadka Farsamada
SZGZ-II-D Macluumaadka Farsamada
1. Nidaamka oo dhan waxaa ku jira cutubka saqafka, birta soo celinta hawada, kombaresarada, iyo qalabka rakibida, kuma jiraan qaybta kombaresarada, suumanka, qaboojiyaha.
2. Qaboojiyaha waa R134a.
3. Shaqeynta kululaynta, iyo beddelku waa ikhtiyaari.
4. Compressor VALEO ama AOKE waa ikhtiyaari.
5. Marawaxadda & afuufuhu ikhtiyaar ahaan sida burush ama burush la'aan.
6. Fadlan nagala soo xiriir sales@shsongz.cn si aad u hesho fursado iyo faahfaahin dheeraad ah.
SZG Taxanaha R & D Taariikhda:
Marka la wanaajiyo heerarka nolosha dadka, heerka raaxada ee loo baahan yahay ayaa sii kordheysa marba marka ka dambeysa, taasoo keentay shuruudo aad iyo aad u adag oo loogu talagalay qaboojiyeyaasha OEM, oo ay ku jiraan muuqaalka qaboojiyaha, awoodda qaboojinta, buuqa, iwm. taxanaha SZG waxaa loogu talagalay inuu la kulmo macaamilka shuruud ahaan, iyadoo ku saleysan ilaalinta deegaanka, tamarta iyo keydinta qalabka, hagaajinta waxtarka, yareynta culeyska, buuqa yar iyo gariirka, amniga iyo kalsoonida, iyo dayactirka saaxiibtinimo. SONGZ alaabooyin cusub ayaa si joogto ah loo soo saaray si loo daboolo baahida suuqa.
Hordhac farsamo oo faahfaahsan oo ah Qaboojiyaha Basaska Taxanaha SZG
1. Tiknoolajiyadda isku-dhafan ee wax-qabadka
Kondheerka waxaa lagu rakibay dabayl, iyadoo leh aag ballaaran oo dabaysha u jeeda, gashiga hawo ayaa loogu talagalay labada dhinac ee daboolka kore ee hawo-mareenka, taas oo sii yaraynaysa iska caabbinta dabaysha koombuyuutarka iyo hagaajinta waxtarka sarrifka kuleylka.
2. Naqshad fudud
Naqshadeynta hawo-mareenka oo aan lahayn qaab-dhismeedka dabaysha qolofta hoose. Dhererka guud ee badeecada kama badnayo 2.5 mitir. Qaab dhismeedka qaab dhismeedka waa is haysta. Naqshadeynta kore waxay ka dhigeysaa sheyga mid miisaan fudud, muggiisuna yaryahay.
3. Codsiga qalabka tikniyoolajiyadda sare
SZGZ (jirka cidhiidhiga ah) alaabada, sheyga hoose ee qolofku wuxuu ka samaysan yahay LFT + wax aluminium ah. Marka la barbardhigo walxaha kale ee isku dhafan, waxay leedahay qallafsanaan gaar ah oo gaar ah iyo xoog gaar ah, caabbinta saamaynta wanaagsan; hagaajinta iska caabbinta gurguurta, iyo xasiloonida cabbir wanaagsan. Caabbinta daalku waa mid aad u fiican, miisaanka guud ee badeecaduna hoos ayuu u dhacay qiyaastii 15%.
LFT Shell Shell for SZG (Jidh cufan)
4. Fudud Dayactirka
Daboolka kore ee SZG taxane-hawo qaboojiye hawo-qaboojiye ayaa korsada qaab dhismeedka isku xira fiiq. Looma baahna in laga qaado saxanka daboolka oo dhan marka la xirayo gaariga, taas oo si weyn u badbaadinaysa waqtiga rakibidda. Marawaxadda isku ururinaysa ayaa laga rakibay kor, sidaa darteed looma baahna in la furo daboolka markii laga saarayo marawaxadda haysa. Marka matoorka uumiga la dayactirayo, waxaa kaliya lagama maarmaan ah in la furo dhinacyada daboolka, taas oo u sahlan adeegga iibka kadib.
5. Naqshadeynta Amniga
Jihada dhinaceeda ee saqafka uumi-baxa saaran wuxuu baabi'inayaa isku-xirnaanta labaad, iyo marinka hawada ee isku-darka uumiga wuxuu qaataa qaab cusub oo qolof ah oo isku-laaban, kaas oo aan yareyn karin culeyska guud ee sheyga, laakiin sidoo kale si wax ku ool ah uga hortagi kara khatarta qarsoon Biyo daadashada maalmaha roobka.
6. Baaxad ballaaran oo arji ah
Baaxadda guud ee SZG waxay ku habboon tahay basaska laga bilaabo 6 illaa 8.4 mitir iyo baska dalxiiska ee 5 illaa 8.9 mitir. Isla mar ahaantaana, wadarta guud ee qaboojiyaha 'SZGZ' (jirka cidhiidhiga ah) iyo kala dheereynta marinka hawo waa 180mm, taas oo 120mm ka yar jirka ballaaran, kaas oo lagu dabaqi karo baska yar ama cidhiidhiga ah.
Hawlaha SZG ee Basaska AC Casriyayn （Ikhtiyaar）
1. Tiknoolajiyadda tuubooyinka iyo kuleylka
Dhuumaha kululaynta biyaha ayaa lagala bixi karaa xudunta uumiga si loo ogaado shaqada kuleylka ee qaboojiyaha lana buuxiyo shuruudaha heerkulka deegaanka baska aagga qabow.
2. Teknolojiyada xakamaynta dhexe ee isku dhafan
Isdhexgalka gudiga xakamaynta iyo qalabka gawaarida ayaa ku haboon qaabka dhexe ee xakamaynta gawaarida. Hawsha kontoroolka fog ee kontoroolka sheyga ayaa lagu daray si loo fududeeyo maareynta hawlgalka macaamiisha.
3. Lagu dabaqi karo heerkulka heerkiisu hooseeyo
Waxay kordhin kartaa marawaxadda soo ururinaysa waxayna sifiican nidaamka ugu hagaajin kartaa, taas oo ku habboon 10-12m baska qaboojiyaha xagaaga ee gobollada qabow sida Waqooyiga Yurub.
4. Tiknoolajiyada sifaynta hawada
Waxaa ku jira inta badan afar hawlood: aruurinta boodhka elektaroolka, iftiinka ultraviolet, matoor danab xoog leh, iyo sifeynta sawir qaadista, kaas oo lagu gaari karo waqti-buuxa, anti-virus aan kala go 'lahayn iyo nadiifin, nadiifinta urta iyo ka-qaadista boodhka oo wax ku ool ah, oo si wax ku ool ah u xannibaysa waddada gudbinta fayraska.
5. Teknolojiyada Nidaamka Tamarta
Marka loo eego heerkulka baska iyo deegaanka, qulqulka marawaxadaha iyo kombaresarada waxaa lagu hagaajiyaa marxalado kala duwan si loo yareeyo bilowga iyo joogsashada kombaresarada, loona hagaajiyo raaxada guud ee rakaabka, loona hubiyo in nidaamku si hufan ugu shaqeeyo. .
Hore: Nidaamka Maareynta Kulaylka Batariga ee Baska Korantada, iyo Tababaraha
Xiga: Qaboojiyaha Baska, Tababaraha, Baska dugsiga iyo Basaska Gaaban
Bus-qaboojiyaha Basaska Loogu Talo Galay Baska Labaad
Qaboojiyaha Baska Double Decker
Qaboojiyaha Dhaqaalaha ee Baska, Tababaraha, Dugsiga ...
Qaboojiyaha Baska, Tababaraha, Baska dugsiga iyo ...